Ny 24 tsara indrindra ny teti-piaviana tapa-kevitra ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-pahaizana momba ny totozy
Ny 24 tsara indrindra Tadiom-bavaka ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 12, 2016
Raha toa ianao ka tattoo aficionados sy mpandevina, misy karazan-trosany an'arivony maro izay azonao atao ny mifandray aminy.
Ny fampiasana tattoos #chest dia lasa izay hitantsika amin'ny mpidoroka sasany noho ny fiantraikany mahery vaika eo amin'ny vatany. loharanon-tsary
Ireo #tattoos dia mety ho tsara tarehy, mahavariana, mahavariana, mahatsiravina ary manahiran-tsaina mihitsy aza. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny zavatra tianao hotratrarina aorian'ny fotoanao. loharanon-tsary
Tafio ny tratra ao am-bala. Ny #designs dia mety ho iray amin'ireo tatoazy tena tsara indrindra mety ho hitanao na aiza na aiza manerana izao tontolo izao. loharanon-tsary
Azonao atao ny mahafantatra hoe aiza no misy ny tratra rehefa manao tatoazy. Ny lehilahy dia afaka milaza fa ny tratra dia avy amin'ny faritra izay akaikin'ny tendany, miresaka momba ireo lohalika midina mankany amin'ny hozatry ny fakantsary. Izany no azon'ireo lehilahy ho voafaritra. loharanon-tsary
Ny vehivavy dia afaka milaza fa ny faritra misy ny nono dia tsy tafiditra ao amin'ny tratrany. Tsy midika izany fa mety tsy afaka manao tatoazy ianao amin'ireny faritra ireny. loharanon-tsary
Raha ny momba ny hoditra zavakanto hoditra, dia tsy misy zavatra tsy mandeha. Tokony ho fantatrao fa ny iray amin'ireo hevi-diso mitranga rehefa miresaka momba ny tatoazy tratra dia tsy mampangirifiry ilay sary. loharanon-tsary
Ny antony eritreretin'izy ireo manoloana ity tsipika ity dia satria mieritreritra izy ireo fa ny faritra eo amin'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny lahy sy ny vavy ary ny vehivavy dia misy ny tratra. loharanon-tsary
Hiresaka aminareo izahay fa azo lazaina ho anisan'ny tratra ny felana tsara tarehy. Alohan'ny ahafahanao misafidy ny karazana tratrao, andramo ary araho tsara fa mifidy ny endrika izay ho tanteraka amin'ny tabataba izay hita eo amin'ny tratra sy ny curve voajanahary koa. loharanon-tsary
Aza mieritreritra ny sary eo amin'ny aterineto. Mahagaga fa ireo tatoazy tratra izay aseho ao amin'ny aterineto dia tsy mitovy amin'ny vatanao. loharanon-tsary
Ny tatoazy tranainy dia efa nisy talohan'ny 20th taonjato. Rehefa mampiasa ny tatoazy tratra ianao dia miantoka fa manana izany rafitra tonga lafatra izany izay hitantara ny tantaranao. loharanon-tsary
Ny ankamaroan'ny olona manao tatoazy tratra dia milaza fa mitazona izany endrika na ny dikan'io tatoazy io ao am-pony izy ireo. Hanambara aminao foana izahay fa ny zavatra tsara indrindra azonao atao alohan'ny handehananao sary hosoka dia ny fanaovana fikarohana voalohany. loharanon-tsary
Ny tatoazy an-tratra dia nanjary toy ny mivezivezy manerana ny toerana izay ahitantsika fa manintona ny fomba samihafa ary ny fomba fijery dia tsy hita afa-tsy rehefa manana mpilalao tattoo tsara ianao. Jereo ity karazana tatoazy ity ary lazao anay fa mahafinaritra izany. loharanon-tsary
Ny fampidirana ny tatoazy tratra dia azo henoina amin'ny ampahany amin'ny vatana. Indraindray, hitantsika fa ny tataom-baravarana dia mijery tsy mahazatra. Misaotra noho ny fahasamihafana goavana tamin'ny famoronana tatoazy manerantany. Tsy afaka mahita tatoazy tratra ianao ary tsy hijery fanindroany. loharanon-tsary
Zava-dehibe ny hahatakaranao fa nanjary tena ilaina ny tatoazy ho an'ny tatoazy. Tokony haka fotoana handinihanao amin'ny alalan'ny katalaogin'ny vorona ianao alohan'ny hisafidiananao ny safidinao. Ny fotoana voalohany tokony hataonao dia mahazo tatoazy izay hiteny aminao hoe inona no ao am-pianarana. loharanon-tsary
Misy karazam-borona isan-karazany; voromailala sy karazam-borona amin'ny karazana sy ny habeny rehetra. Ny vorona tsirairay dia manana ny lanjany izay ny antony tokony hitandremantsika ny karazam-borona tian'ny vorona izay hampiasaintsika. Raiso, ohatra, ny magy na ny goaika dia mifandray amin'ny majika maoderina sy ny filalaovana ody, raha fantatra kosa ny voromailala fotsy ka maneho fiadanana sy fahadiovana. loharanon-tsary
Ny fomba tsotra hamaliana ity fanontaniana ity dia ny hanamarina ny tatoazy izay tadiavinao. Ny tatoazy tranainy dia maneho ny maha-mpanjaka any amin'ny toerana maro. Ankehitriny, mihamitombo ny fironana eo amin'ny tatoazy tratra ary misy antony maro hafa koa ny antony tokony hahatonga anao ho an'ny tenanao. loharanon-tsary
Zava-dehibe ny fahafantaranao fa nanjary zava-dehibe ny drafitra tatoazy. Tokony haka fotoana handinihanao amin'ny alalan'ny katalaogy an-tserasera ianao alohan'ny hisafidiananao ny safidinao. loharanon-tsary
Alao sary an-tsaina hoe ity tatoazy tranainy ity dia tsy mitaky fanamby hamokatra. Miaraka amin'ny asa an-tokantrano tsara amin'ny toerana hahazoana azy, dia azonao antoka fa manana an'ity ity iray ity. loharanon-tsary
Ny tato an-tratra lahy dia tsy handeha haingana. Ny tratran'io lehilahy io dia afaka misintona mifanaraka amin'ilay olona ary satria matevina sy malalaka, maro ny sary azo atao eto. loharanon-tsary
Tianao ve ity? Ny fotoana voalohany tokony hataonao dia mahazo tatoazy izay hiteny aminao hoe inona no ao am-pianarana. loharanon-tsary
Amin'ny fahazoana tatoazy tahaka izao, maka fotoana ary mametraha fanontaniana ary fantaro ny toerana tianao hahatongavana amin'izany. loharanon-tsary
koi fish tattootattoos crosshenna tattooTattoo Feathertattoo watercolortattoos backlion tattoostatoazy fokotattoo cherry blossomtatoazy voninkazotattoos ho an'ny lehilahyraozy tatoazytattoos voronamehndi designHeart Tattoostato ho an'ny vatofantsikamasoandro tatoazycat tattoostattoostattoos mpivadytanana tatoazytattoo eyetattoo infinitycompass tattootattoos sleevetattoos footelefanta tatoazyloto voninkazomozika tatoazyNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoos mahafatifatymoon tattoostattoos rahavavyscorpion tattootattoo ideasdiamondra tattootattoosanjely tattoosfitiavana tatoazyarrow tattootatoazy lolorip tattoostatoazy ho an'ny zazavavytattoo octopusAnkle Tattoostattoos armeagle tattoostratra tatoazynamana tattoos tsara indrindraTatoazy ara-jeometrika